TIDE: fiaraha-miasa, fampidirana, délégation, fiaraha-miory | Martech Zone
TIDE: fiaraha-miasa, fampidirana, délégation, fiaraha-miory
Alatsinainy, Novambra 6, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Namaky boky roa vao haingana aho (eo ankavanana). Boky roa ireo boky roa ireo handresena ny sasany amin'ireo lafiny ratsy amin'ny orinasa.
Fanindroany izao aho mamaky ny “Love is the Killer App”. Mety tokony hovakiako izany isam-bolana. Tiako ny mieritreritra azy ho 'hippy' amin'ny boky fandraharahana. Tena fananganana fifandraisana tsara amin'ireo olona manodidina anao izany. Manahy ny olona aloha, avy eo tsy mila miahiahy momba ny orinasanao ianao.
Ny Silos, Politics ary Turf Wars dia boky tsara ihany koa. Tena ny familiana ny sain'ny mpiasa tsy hifanaraka sy ny fifantohany amin'ny tanjona iraisan'ny fikambanana.
Tonga tamin'ny fanafohezana ahy manokana aho izay maneho ny boky roa… TIDE
Fiaraha-miasa - miasa amin'ny ekipa dia manome fividianana sy fahombiazana. Atsaharo ny fizotrany izay mampiroborobo ny ady sy ny politika. Ny olona izay tsy afaka miasa ao amin'ny ekipa dia tsy mitady ny orinasa fa mitady ny azy manokana. Manofa sy mampiroborobo ny ekipa mpilalao.
Ny fampidirana - anisan'izany ny mpanjifanao (anatiny sy ivelany) dia hanatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatrao sy ny serivisinao.
Delegasiona - avelao ireo manam-pahaizana nokaramainao handray fanapahan-kevitra sy hitana andraikitra azy ireo.
Fiaraha-miory - mahatakatra ireo sakana, teboka fanaintainana ary tsy fahombiazan'ny fikambanana ary miaraha-miory amin'ireo mpanjifa sy mpiasa mila miaritra amin'izy ireo.
4 Segondra na Bust